RASMI: Yaya Toure Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Fadhiistay Ciyaaraha Caalamiga Ee Qarankiisa
HomeAfricaRASMI: Yaya Toure Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Fadhiistay Ciyaaraha Caalamiga Ee Qarankiisa
20/09/2016 Samatar Mohamed
Ciyaartoyga khadka dhexe ee kooxda Manchester City ee Yaya Toure ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah ee xulka qarankiisa Ivory Coast, wuxuuna 33-sanno jirkani go’aansaday inuu ciyartoyda da’yarta ee xulka qarankiisa uu fursad siiyo.
Yaya Toure ayaa sannadkii 2015-kii xulka qarankiisa Ivory Coast ka caawiyey inay ku guuleystaan koobka qaramada qaaradda Afrika, balse Toure ayaan ciyaari doonin koobka qaramadda Afrika ee horaanta sannadka cusub la qaban doono.
Yaya Toure ayaa kulankiisii ugu horeeyay u saftay xulka qarankiisa 2004-kii wuxuuna ugu danbeyn shaaciyay in la soo gaadhay wakhtigii uu ka fadhiisan lahaa waajibaadka xulka qarankiisa uu sida weyn ula soo dedaalay. Yaya Toure ayaa 4 sannadood oo xidhiidh ah ku guuleystay abaal-marrinta xiddiga Afrika ugu fiican ka hor intii aanu Pierre-Emerick Aubameyang soo gaba-gabayn.
Yaya Toure ku daabacay bartiisa Twitter-ka inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalami ee xulkiisa, waxaana qoraalkiisu u dhignaa sidan: “Waxaa jira go’aano ay adag tahay in la qaato, laakiin waxaa igu waajib ah inaan u dhaafo ciyaartoyda da’yarta ah. Kadib 14 sannadood oo heer ugu sareeya ah oo aan la soo qaatay Elephants-ka, waxaan soo gaadhay dhammaadkii waayahayga ciyaareed ee Ivory Coast. Dhammaan waad ku mahadsan tihiin taageeradiina iyo dhammaan jamaahiirtayda”.
Yaya Toure ayaan xili ciyaareedkan ku jirin xaalad fiican kadib markii uu Guardiola ka saaray liiska Manchester City ee Champions Leaque isla markaana waxa uu Guardiola dalbaday in wakiilka Yaya Toure ee Dimitri Seluk uu raali galin ka bixiyo hadaladii weerarka ahaa ee uu u soo jeediyay Guardiola.